IRacking & Shelving Abavelisi & nababoneleli-i-China Racking & Shelving Factory
1. I-AS / RS (i-Automated Storage and Retrieval System) ibhekisela kwiindlela ezahlukeneyo zokulawulwa kwekhompyutheni yokubeka ngokuzenzekelayo kunye nokubuyisela imithwalo kwiindawo ezithile zokugcina.
2.Imekobume ye-AS/RS ingaquka uninzi lwetekhnoloji elandelayo: irakhi, i-crane ye-stacker, indlela yokuhamba ethe tye, isixhobo sokuphakamisa, ifolokhwe yokuchola, inkqubo yangaphakathi & ephumayo, i-AGV, kunye nezinye izixhobo ezinxulumeneyo.Idityaniswe nesoftware yolawulo lwendawo yokugcina impahla (WCS), isoftware yolawulo lwendawo yokugcina impahla (WMS), okanye enye inkqubo yesoftware.
1. I-Cantilever isakhiwo esilula, esakhiwe ngokuthe tye, ingalo, isithinteli sengalo, isiseko kunye ne-bracing, sinokuhlanganiswa njengecala elinye okanye icala eliphindwe kabini.
2. I-Cantilever yindlela yokungena evuleleke ngokubanzi phambi kwendawo yokubeka, ilungele ngokukodwa izinto ezinde nezinkulu njengemibhobho, iityhubhu, amaplanga kunye nefanitshala.
1. I-Boltless shelving yinkqubo ye-shelving enoqoqosho kunye neendlela ezininzi, eyenzelwe ukugcina ubungakanani obuncinci kunye nobukhulu bempahla yokufikelela ngesandla kwiindidi ezibanzi zezicelo.
2. Amacandelo aphambili abandakanya ngokuthe tye, i-beam, i-bracket ephezulu, i-bracket ephakathi kunye nepaneli yensimbi.
1.I-pallet yokukhwela i-racking yeyona ndlela ilula kwaye isetyenziswa kakhulu, ikwazi ukusebenzisa ngokupheleleyo indawonzimaukugcinwa komsebenzi,
2.Amacandelo aphambili abandakanya isakhelo, umqadi kunyeenyeizixhobo.
I-Carton flow racking, exhotyiswe nge-roller ethambekele encinci, ivumela ikhathoni ukuba ihambe ukusuka kwicala eliphezulu lokulayisha ukuya kwicala elisezantsi lokubuyiswa.Igcina indawo yokugcina impahla ngokususa iindlela zokuhamba kunye nokwandisa isantya sokuchola kunye nemveliso.
1. I-Push back racking ibandakanya isakhelo, umqadi, isiporo senkxaso, ibha yenkxaso kunye neenqwelo zokulayisha.
2. Umzila wenkxaso, obekwe ekunciphiseni, ukuqonda inqwelo ephezulu kunye ne-pallet ehamba ngaphakathi kwendlela xa umqhubi ebeka i-pallet kwinqwelo engezantsi.
1. I-T-post shelving yinkqubo ye-shelving enoqoqosho kunye neendlela ezininzi, eyenzelwe ukugcina ubungakanani obuncinci kunye nobukhulu bemithwalo yemithwalo yokufikelela ngesandla kwiindidi ezibanzi zezicelo.
2. Amacandelo aphambili abandakanya ngokuthe tye, inkxaso yecala, ipaneli yensimbi, ikliphu yepaneli kunye ne-back bracing.
I-Four Way Shuttle, ICarton Live, IShuttle yomntwana, Asrs Ugcino, Umhambisi, Qhuba kwi Racking,